भुम्लु गाउँपालिकाको नीति,कार्यक्रम र बजेट – NamoBuddha Khabar
भुम्लु गाउँपालिकाको नीति,कार्यक्रम र बजेट
बुधबार, कार्तिक ०६, २०७६ | ५:११:४४ |
भुम्लु गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुवँरले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
आदरणीय सदस्य ज्यूहरु
आज मिति २०७५ असार १० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय सभा समक्ष उपस्थित भएको छु । यस महत्वपूर्ण घडीमा म लोकतन्त्रको स्थापना र जनजीवीकाका विभिन्न सन्दर्भमा भएका आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्न चाहन्छु ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका जनताको अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने थलोको रुपमा स्थानीय तह स्थापना भएको हो । यस क्रममा गत आ.व. २०७४।७५ को नीति तथा कार्यक्रम यस सभाबाट स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयन भईरहेको छ । आगामी आ.व. २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान परिस्थितीको धरातलमा बसेर हिजोका सिकाईलाई आत्मसात गर्दै भोलिका आवश्यकतालाई योजना र मापदण्डका सीमा भित्र राखी समृद्ध गाउँपालिका बनाउने अभियानलाई परिलक्षित गरी तयार गरिएको छ ।
भुम्लु गाउँपालिकाको आगामी योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा स्थानीय कानूनको मर्म अनुसार गाउँपालिकालाई समुन्नत समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।
सिमीत श्रोतलाई उच्च प्राथमिकता एवम उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने नीति लिईने छ । समग्रमा सशक्त कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नीतिलाई सफलीभूत पार्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ । चौधौं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यका परिसूचक र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग पुग्ने किसिमले योजना तथा कार्यक्रम संचालन गरिने छ । अब म गाउँपालिकाले आ.व. २०७५।७६ मा विभिन्न क्षेत्रमा लिने नीतिगत व्यवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
आर्थिक विकास सम्बन्धी
– कृषि हाम्रो मूल पेशा हो वर्तमान निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई विस्थापीत गरी व्यवसायीक खती तर्फ भुम्लुवासी कृषकहरु लाई आकर्षित गरिनेछ ।
– आ.व. २०७५।७६ लाई फलफूल बर्षको रुपमा मनाउने राष्ट्रिय अभियानलाई मध्यनजर गर्दै प्रचार प्रसार सहितको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– गाउँपालिकामा एक नमुना कृषि प्रदर्शनी प्लट स्थापना गरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ ।
– रासायनिक मल विषदीको प्रयोगलाई विस्थापित गरी जैविक मल बनाउने तरिका प्रशिक्षण गराई प्राङ्गारीक खेतीलाई बढावा दिईने छ ।
– कृषि क्षेत्रमा विद्यमान कृषकहरुको समस्यालई सकेसम्म किसानकै खेतबारीमा समाधान गर्ने र समाधान हुन नसकेका समस्याहरुलाई अनुसन्धानको थलो सम्म पु¥याउने र अनुसन्धानबाट परीक्षण गरी प्रमाणित भै सिफारिश गरिएका उन्नत कृषि प्रविधि एवम बीउ विजनलाई कृषकस्तरमा पु¥याउने नीति लिइने छ ।
– गाउँपालिकाको केहि स्थानमा नमूना माटो परिक्षण गरी माटो, हावापानी अनुकुलको खाद्यान्न बाली, फलफूल र तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईने छ ।
– कृषक पाठशाला तथा विद्यालय कृषि शिक्षा जस्ता कार्यक्रम संचालन गरी कृषिको क्षेत्रमा भएका नविनतम प्रविधिको बारेमा जानकारी तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– साना तथा मझौला कृषकहरुलाई लक्षित गरी डिप बोरिङको निर्माण एवं कृषि पकेट क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईने छ ।
– कृषि तथा प्राविधिक क्याम्पस स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
– पशु नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– भूंई तथा डाले घाँसको ब्लक स्थापना गरी पशु आहारको न्यूनतालाई पूर्ती गरिनेछ ।
– सहकारी संस्थाको स्थापना गर्ने वचत र लगानीलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय जनताको आयस्तर विकासमा योगदान पु¥याउन आवश्यक सहयोग गरिने छ । गाउँपालिकामा सहकारी दर्ता र अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थीत बनाइने छ ।
– क्रसर उद्योग, नदीजन्य सामाग्री लगायतका गाउँपालिकाको आन्तरीक आयसँग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई उपयुक्त मापदण्डका आधारमा व्यवस्थित परिचालन गरिनेछ । आन्तरीक श्रोतको दायरालाई फराकीलो पारिने छ ।
– गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण सडकहरुको स्तरोन्नती, ट्रयाक विस्तार तथा कालेपत्रे गर्ने कार्य संघ सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
– गाउँपालिका स्तरीय चक्रपथ निर्माण गर्नको लागि आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गरिने छ ।
– गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयका प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि संघ सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति एवम गाउँपालिकाको आफ्नै श्रोतको परिचालन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
– गाउँपालिका क्षेत्रका भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरुका घर निर्माण सम्पन्न गर्न पहलकदमी लिइनेछ र छुट भएका पीडितहरुलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्न प्रयास गरिने छ ।
– सबै वडाहरुमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार र स्तरोन्नती गरिने छ र वैकल्पिक उर्जाको रुपमा सौर्य उर्जा प्रविधि, सुधारीएको चुलो, वायो ग्यास जडान कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
– पानीका मुहानहरु सुक्दै जाँदा खानेपानी र सिंचाईका श्रोतहरुको अभाव भएकोले पानीको पर्याप्तताको लागि सुनकोशीको पानी लिफ्ट एवम डिप वोरिङ गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गरिने छ र रिचार्ज प्रणालीको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
– एक घर एक धारा व्यवस्थीत गरी खानेपानी व्यवस्था गर्न वृहत खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरी खानेपानी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईने छ ।
– विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरुलाई एकिकरण गर्नै व्यवस्था मिलाईने छ ।
– शिक्षामा गुुणस्तरीयता र पहुँचमा समानता स्थापीत गरी विभेदारी शिक्षाको अन्त्य गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
– यस गाउँपालिकाको कम्तीमा एक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा रुपान्तरण र विकास गरिनेछ यसका लागि संघ सरकार, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँग समेत आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
– बाल विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा र विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
– उपयुक्त वातावरण र पूर्वाधारको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्यालयलाई अनुमति र स्वीकृती प्रदान गरिने छ । यसका लागि विद्यालय संचालन मापदण्ड तयार गरिने छ ।
– सवै वडामा भएका खेलकुद मैदानहरुको स्तरोन्नती को लागि प्राथमिकता दिइने छ र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता संचालन गरिने छ ।
– युवा क्लब स्थापना तथा विविध कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सहयोग र प्रोत्साहन गरिने छ ।
– युवाहरुलाई रुपान्तरणका संबाहक र नेतृत्वका साझेदारको रुपमा विकास गर्दै सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका समग्र जिम्मेवारी सम्हाल्न युवा नेतृत्व विकास गरिने छ । उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवाहरुलाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गरिने छ ।
– गुणस्तरीय स्वास्थ्य (प्रतिरक्षात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र प्रतिरोधात्मक) प्रदान गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिने छ । गाउँपालिकामा कम्तीमा २५ बेडको एक अस्पताल संचालन गर्न आवश्यक पहल गरिने छ । पायक पर्ने स्वास्थ्य चौकीमा एक्सरे र ल्याब सेवा संचालन गरिने छ ।
– आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि गाउँपालिका भित्र एउटा एम्बुलेन्स संचालन गरिने छ । यसका लागि एम्बुलेन्स प्राप्तीमा आवश्यक पहल गरिने छ ।
– गाउँपालिका खुला दिसा मुक्त घोषण भै सकेको सन्दर्भमा उक्त कार्यलाई दिगो रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने छ ।
– स्वास्थ्य बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम व्यवस्थापन गरिने छ । गाउँपालिका भित्र स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई ब्यवस्थापन गरिने छ ।
– प्राथमिक स्वास्थ्यलाई निशुल्क रुपमा सहज उपयोगको व्यवस्था गरिने छ । जनशक्ति, औषधी र अन्य उपचार सामाग्रीहरु यथेष्ट उपलब्ध हुने अवस्था तयार गरिने छ ।
– स्वस्थ जीवनशैली पोषण शारिरिक व्यायाम योग अभ्यास आदिका माध्यमबाट जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धन गरिने छ । सुर्ती मदिराजन्य वस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्दै लगिने छ । यसका लागि आवश्यक नियमनको व्यवस्थापन एवम सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
– आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेका महिला, एकल महिला, भिन्न क्षमता भएका व्यक्ति दलित आदिवासी एवम जनजाती तथा विभिन्न वर्ग क्षेत्र तथा समूहको विकासका लागि आय मूलक र सीपमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।
– जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र विधवा महिला, असक्त, अपाङ्ग र बालवालिकालाई नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिदै आएको सुरक्षा वृत्ति समयमै सुलभ तरिकाबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ ।
– जेष्ठ नागरिकहरुको सम्मानजनक बसाई, खानपान र सुरक्षाको लागि आवश्यक नीति ऐन कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । जेष्ठ नागरिकको ज्ञान अनुभवलाई उपयोग गरिने कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
– महिलाको नेतृत्व र क्षमता विकास र लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
– लक्षित वर्गहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहजीकरणको लागि संरचना निर्माणमा जोड दिइने छ ।
– पूर्ण अशक्त र अपांगता भएका ब्यक्तिको परिवारका एकजना सदस्यलाई हेरचाह सम्बन्धी र रोजगारमूलक तालीमका साथै आय आर्जनका लागि सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
– लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गर्दै गाउँपालिकाको सबै संयन्त्रमा महिला सहभागिताको लागि प्रयत्न गरिने छ ।
सुशासन तथा संस्थागत संरचना
– गाउँपालिकाले सम्पादन गर्ने सबै कामकारवाहीलाई जवाफदेहि र पारदर्शी बनाइने छ । अनिवार्य रुपमा नियमिति प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरु प्रकाशनमा उच्च महत्व दिइने छ । गाउँपालिकाको वेबसाइट मार्फत गाउँपालिकाका गतिविधीहरु नियमित प्रकाशनको ब्यवस्था मिलाइने छ ।
– भ्रष्टाचार विरुद्धमा शुन्य शहनशिलता सहितको सामाजिक सचेतना एवं सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरु संचालन गरिने छ । – गाउँपालिकामा रहेका जनशक्तिलाई आफ्नो विषयप्रति पुनर्ताजगी गराई राख्न तत् तत् क्षेत्रको तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । गाउँपालिकाको काम कारवाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि अन्तर पालिका भ्रमणहरु मार्फत सिकाईका अभ्यासहरुलाई प्रवद्र्धन गरिने छ ।
– योग्य र दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र कर्मचारीहरुलाई विशेष प्रोत्शाहन गर्न कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने छ ।
– दोलालघाट क्षेत्रलाई ¥याफ्टिङ र फिसिङ सेन्टरको रुपमा विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कार्य संचालन गरिने छ ।
– मूलखर्क भिमसेन र गणेश मन्दिरको धार्मिक महत्वको प्रचार प्रशार गरि धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइने छ ।
– पर्यटकको सुविधाको लागि होम स्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने छ । पयटकीय सेवा क्षेत्रको गुणस्तर व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइने छ ।
– गाउँपालिकाको पहिचान अन्तराष्ट्रिय जगतमा फैलाउन , पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि विदेशको शहर सँग भगिनि सम्बन्ध कायम गर्न पहल गरिने छ ।
– सुशासन र कार्य सम्पादन चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि प्रत्येक वडा र गाँउपालिकाको कार्यालयमा इन्टरनेट र इन्ट्रानेट को व्यवस्था गरि सम्पूर्ण गाँउपालिकाको कामकाज प्रविधि मैत्री बनाइनेछ ।
– सेवाग्राहीहरुको बाक्लो उपस्थिती हुने कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरुमा (प्रतिक्षालय, स्वास्थ्य चौकी आदि) निशुल्क इन्टरनेट सेवाको क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
– गाँउपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा हस्तलिखित रुपमा संचालन गरिने कार्यहरुलाई सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विस्थापीत गरिनेछ ।
– गाँउपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली आगामी वर्ष भित्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– गाउँपालिका भित्रका वास्तविक सुकुम्वासी हरुको पहिचान गरी तिनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिने छ ।
– प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण र भू उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि र वन क्षेत्रलाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न नदिने नीति लिइने छ ।
– यस गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ मा नापी भएको तर जग्गा धनी पुर्जा वितरण नभएकोले पुर्जा वितरण गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने छ ।
– गाउँपालिकाको क्षेत्रमा संचालित विकास आयोजनाहरुको नियमित रुपमा नतिजामूलक अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिइने छ ।
– गाउँपालिकाको जनसंख्या, भुगोल लगायतका वस्तुस्थितीको वैज्ञानिक अध्ययन गरि लगत संकलन, विविध तथ्यांक विश्लेषण गरी भिलेज प्रोफाइल तयार गरिने छ ।
– गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण पूर्वाधारजन्य योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर) तयार गरी परियोजना बैंकमा राखिने छ । डि.पि.आर तयार भएका त्यस्ता योजनाहरुमा लगानी जुटाउन साझेदारीको अवधारणमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न
आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
– गाउँपालिका क्षेत्रको फोहर मैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिने छ ।
– हरियो वन भुम्लुको धन भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सामुदायिक वनमा आवद्ध समूहको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न वन जन्य उद्योगहरुको संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
– सामुदायिक वनको वन व्यवस्थापनबाट भएको आम्दानी खर्चको सम्बन्धित वडा कार्यालय हुँदै गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– सामुदायिक वन समूहको आम्दानीले सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास गर्दा सम्बन्धित वडा र गाउँपालिकाको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्ने छ ।
– जलाधार, वनजन्य पदार्थ, खानी तथा खनिज पदार्थको पहिचान, संरक्षण, र आवश्यकता अनुसार ढुङ्गा, गिट्टि बालुवा तथा स्लेट आदि खनिजजन्य वस्तुको अन्वेषण र उत्खनन गरिने छ ।
– विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको कार्यान्वयन गरिने छ । गाउँपालिकामा एक विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिने छ र सो को लागि संघ सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय संघ संस्था तथा नीजि क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिने छ ।
गाउँपालिका गठन भर्ई हाल यस सभाबाट पारित पहिलो नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । छोटो समयमानै महत्वपूर्ण कार्यहरु अगाडि बढेका छन् । गाउँपालिका भित्र हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै छन् । हामी प्रति भुम्लु वासीको अपेक्षा पनि बढेको छ । हामीले छनौट गर्ने हरेक नीति, योजना तथा कार्यक्रमले भुम्लुका जनताको अपेक्षाहरुलाई सम्वोधन गरेको हुनुपर्छ । गाउँपालिकाको सीमा, प्राथमीकता एवम बस्तीस्तरमा गई संकलन भएका योजना तथा नेपालको संविधान, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा स्थानीय कानूनको मर्म अनुसार गाउँपालिकालाई समुन्नत समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका योजना तथा कार्यक्रलाई प्राथमिकता दिई आगामी आ.व. को बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
योजना तर्जुमाका आधारहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
गाउँपालिकाले योजना÷आयोजना तथा बजेट तर्जूमा गर्दा योजना÷आयोजना छनौट र प्राथमिकिकरणको आधार र मापदण्ड तयार गरि यस्तो आधार र मापदण्ड तयार गर्दा वस्ति÷टोलस्तर, वडास्तर र गाउँपालिकास्तरका छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र आधार तोकिएको र यस्ता आधार र मापदण्ड तय गर्दा सामान्यतया निम्न विषयहरुलाई मनन गरिएको छ ।
– नेपालको संविधानको अनुसुची ८ र ९ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूचि,
– नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरु
– नेपालको संविधान भाग ४ अन्तर्गतका राज्यका आर्थिक, सामाजिक विकास, प्राकृतिक श्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीतिहरु, धारा ५९ को आर्थिक अधिकार, भाग १९ को आर्थिक कार्यप्रणाली
– नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन
– संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले अंगिकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरु,
– संघीय सरकारले अवलम्वन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरु
– स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरु
– नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताहरु
– स्थानीय सरकार संचालन ऐन
– विकासका समसामयीक मुद्धाहरु जस्तै सामाजिक संरक्षण, दीगो, विकास, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैंगिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास, वाल मैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्रि स्थानीय शासन, खुला दिसा मुक्त तथा पूर्ण सरसफाई, उर्जा संकट लगायतका अन्तर सम्बन्धित विषयहरु,
आगामी आ.व. २०७५।७६ को लागि स्रोत बाँडफाँड गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखी बाँडफाँड गरिएको छ ।
– कृषिमा आधुनिकरण र यान्त्रिकरण
– स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच
– शिक्षाको गुणस्तर विकास
– साझेदारी कार्यक्रम संचालन
– लैंगिक उत्तरदायि कार्यक्रम
– युवा रोजगार कार्यक्रम
– समता मूलक कार्यक्रम संचालन
– विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम
– शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार
अब म आगामी आर्थीक वर्षमा यस गाउँपालिकालाई प्राप्त स्रोत र सो को विनियोजनको बारेमा
संक्षिप्त रुपमा प्रकाश पार्न चाहन्छु ।
आगामी आ.व. २०७५।७६ को लागि आय निर्धारण गर्दा कूल आन्तरिक आय रु. १,६५,८७००३।–(एक करोड पैंसठ्ठी लाख सतासी हजार तीन) हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट रु.७०७०००००।–(सात करोड सात लाख मात्र) ,संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रु.५०७९००००।–(पाँच करोड सात लाख नब्बे हजार),संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान बाट रु. १३२६०००००।–(तेह्र करोड छब्बिस लाख मात्र) तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान वापत रु. ७६९८०००।–(छयहत्तर लाख अन्ठानब्बे हजार), प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रु. १३२१५०००।–(एक करोड बत्तिस लाख पन्द्रहजार मात्र) त्यसै गरी गत बर्ष विनियोजित शिर्षकमा खर्च नभई मौज्दात रकम रु. ५६५०००००।– (पाँच करोड पैंसट्ठी लाख मात्र) गरी जम्मा रु. ३४८०९०००३।– (चौंतीस करोड असी लाख नब्बे हजार तीन मात्र) । तथा यस आ.व. मा संचालन हुने कार्यक्रमहरुमा रु. १ करोड बराबरको जन श्रमदान तथा लागत सहभागीता हुने अनुमान गरिएको छ ।